YEYINTNGE(CANADA): Monday, May 19
ဘန်ကီမွန်း မြန်မာပြည် သွားမည် (မဇ္ဈိမ)
တနင်္လာနေ့၊ မေလ 19 2008 20:46 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် လာမည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၃ ရက်တာ ခရီးသွားရောက်မည်ဟု သူ၏ ပြောခွင့်ရသူ Michele Montas က ယနေ့ ကြေညာသည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက သူ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ထိပ်တန်း မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဟု ဆိုထားသော်လည်း လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်းက သူ၏ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် ပေးစာအပေါ် တစုံတရာ တုံ့ပြန်မှု မပြုခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် ရ၊ မရကိုမူ မသိရသေးပါ။
“ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ဒီခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နအဖ ဆီကနေ အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်မှုတွေ ရလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်” World Food Program ကမ္ဘာ့စားနပ် ရိက္ခာအဖွဲ့ကြီး၏ ထိုင်းနိုင်ငံရုံးခွဲမှ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Mr. Marcus Prior က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြန်မာ လေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အကူအညီပေးနေသည့် အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း World Vision ၏ ထိုင်းနိုင်ငံရုံးခွဲ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Mr. James East ကလည်း “သူတို့ ဒီခရီးစဉ် နောက်ပိုင်းမှာ အရင်ကထက် ပိုပြီး တိုးလုပ်လာနိုင်တာတွေ ရှိလာမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဥပမာ လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတွေကို ဧရာဝတီတိုင်းထဲအထိ ဝင်ရောက်ခွင့်တွေ ရလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယမန်နေ့ကလည်း မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၏ အထူး သံတမန်ဖြစ်သူ လူသားချင်းဆိုင်ရာ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးဌာန အကြီးအကဲ Mr. Holmes ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယနေ့ နံနက်တွင် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှ မုန်တိုင်းဒဏ် အဆိုးဆုံးခံရသည့် ဒေသများသို့ သွားရောက် လေ့လာပြီးအပြန် ရန်ကုန်ရှိ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံခြားသံတမန်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် ရှိသည်ဟု ရန်ကုန်မှ လာသော သတင်းများက ဆိုသည်။
Mr. Holmes သည် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းထံမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံ လိပ်မူထားသော တတိယမြောက် ပေးစာတစောင်နှင့်အတူ တနင်္ဂနွေနေ့က ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ကုလ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် သူ၏ သံတမန်တို့ ကိုယ်တိုင် လာရောက်သဖြင့် နအဖ အနေနှင့် မလွှဲမရှောင်သာ အနည်းငယ် အလျှော့ပေးရမည့် အခြေအနေ ရှိလာနိုင်သော်လည်း ကမ္ဘာ့ပြည်သူများ မျှော်လင့်ထားသည့် အခြေအနေအထိ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ယူဆ၍ မရနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတခုမှ အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
“ဘန်ကီမွန်းကိုယ်တိုင် လာမယ်ဆိုရင်တော့ တကမ္ဘာလုံးရဲ့ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းကို ခံရတာမို့ မလွှဲမရှောင်သာ တချို့ဟာလေးတွေကို လိုက်လျောလာလိမ့်မယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဘာမှ မလုပ်နိုင်တာထက် စာရင် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကို အားနာပြီး မလွှဲမရှောင်သာ အထိုက်အလျောက် လိုက်လျောတာလေးတွေက ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အထိုက်အလျောက် အသက်ရှူချောင်မယ်လို့ ကျနော် မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာမြို့၌ ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေသူ လပွတ္တာအမတ် ဒေါက်တာ အေးကြူကလည်း “ကျနော်ကတော့ ဒီခရီးစဉ်ကနေ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရလာမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ရလာပါစေလို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ကူညီ ကယ်ဆယ်မှုတွေ ဆိုတာ ရေတိုပဲ။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေက ရေရှည်ပေးမှာ။ ဒါတွေလာမှ ဒုက္ခသည်တွေဟာ လူစဉ်မီမယ်၊ သူတို့ရဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ လုပ်လို့ရမယ်၊ သူတို့ဘဝ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာမယ်” ဟု ပြောသည်။
တဖက်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များကလည်း မြန်မာပြည်၏ အကျပ်အတည်း ဖြေရှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ အစည်းအဝေးတရပ် ကျင်းပကာ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းသွားကြသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/19/20080အကြံပြုခြင်း
မုန်တိုင်းဒုက္ခသည် ၂.၄ သန်းထိ ဖြစ်လာသည့်ကြားမှ ကျောင်းများပြန်ဖွင့်မည်ဟု စစ်အစိုးရ ကြေညာ
နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဒဏ်ကို အပြင်းအထန် ခံစားခဲ့ရသူတွေ အပါအ၀င် ဘေးဒုက္ခ ရောက်နေသူပေါင်းဟာ ၂.၄ သန်းရှိသွားပြီလို့ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူသား ဘေးဒုက္ခဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံး တာဝန်ရှိသူက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ
မှာမှ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့မှာ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့မယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရက ကြေညာ လိုက်ပြန်တာကြောင့် ကျောင်းတွေကို ဒုက္ခ သည်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေအဖြစ် အသုံးပြုနေရတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာရော၊ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ကလေးသူငယ်တွေ ပညာ ဆက်သင်ကြားနိုင်ရေးပေါ်မှာရော စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်လာရပါတယ်။
ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထား
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့ရဲ့ စစ်ဆေးတိုင်းတာချက်တွေအရ မုန်တိုင်းဒဏ်
သင့် လူထုအရေအတွက်ကို ၂.၄ သန်းအထိ ကုလသမဂ္ဂက အခုလို တိုးမြှင့်ပြောဆို
လိုက်တာပါ။ ဒီကနေ့ ဘန်ကောက်မြို့၊ နိုင်ငံခြားသတင်းစာဆရာများအသင်းမှာ ပြုလုပ်
ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါ
တယ်။ နိုင်ငံတကာက အကူအညီတွေကို စစ်အစိုးရက ပိုပြီးလက်ခံခဲ့တာကြောင့် အကူ
အညီတွေ တိုးပြီးဝင်လာခဲ့ပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးက တောင်းဆိုထား
သလို အကူအညီပေးလုပ်သားတွေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ
ကိုတော့ ခုချိန်ထိ ၀င်ခွင့်မပြုသေးပါဘူး။ ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသတွေဆီကို အကူအညီပေး အဖွဲ့အစည်းတွေ သွားရောက်ခွင့်ပေါ် အကန့်အသတ်တွေ ဆက်ရှိနေသေးတာကြောင့်
လည်း စစ်ဆေးတိုင်းတာမှုတွေ နှောင့်နှေးနေရကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူတွေ
ဒုက္ခရောက်သူပေါင်းက ၂,၀၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိနေပေမယ့် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာ
လက်ရှိ ရောက်နေပြီးသား အရေအတွက်ကတော့ စုစုပေါင်းအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်
မစ္စ အမန်ဒါ ပစ်တ် (Ms. Amanda Pitt) ဟာ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူသားဘေးဒုက္ခဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံး (OCHA) ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပါ။
“မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၁၂၀ လောက်မှာ လူပေါင်း
၁၅၀,၀၀၀ လောက် ရောက်နေတဲ့ပုံရှိပါတယ်။ ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသတွေက လူတွေဟာ ရွှေ့ပြောင်းနေကြတာကြောင့် အဲဒီစခန်းတွေမှာ စုစုပေါင်း လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်
ဆိုတာကို တိတိကျကျသိဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်။ စခန်းပေါင်း ၁၂၀ ထဲမှာ တရားဝင်ဖွင့်
ထားတဲ့ စခန်းတွေရော၊ တခြားနေရာတွေရော ပါပါတယ်။” လို့ မစ္စ အမန်ဒါ ပစ်တ်က ပြောသွားပါတယ်။ သူပြောသွားတဲ့ တခြားနေရာတွေဆိုတာကတော့ ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းတွေ၊ ဘုရားဝင်းတွေ စသည်ဖြင့် နေရာတွေပါ။
WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့အနေနဲ့ အကူအညီတွေ တိုးပြီးပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် နှေးကွေး
ပြီး လုံလောက်မှုမရှိသေးပါဘူးလို့ WFP ရဲ့ ဘန်ကောက်ရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာ
မားကပ်စ် ပရိုင်ယာ (Mr. Marchus Prior) ကပြောပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အကုန်ထိဆိုရင် လူပေါင်း ၂၅၀,၀၀၀ ကျော်ကို စားနပ်ရိက္ခာတွေ အလုံအလောက် ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးပြီလို့ ကျနော်တို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကူ အညီမရသေးတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့
လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကျနော်တို့လုပ်သားတွေက အဆက်မပြတ် အစီရင်ခံနေပါတယ်။”
လို့ မစ္စတာ မားကပ်စ် ပရိုင်ယာက ပြောသွားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့က ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ကို WFP ရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဓိကနေရာအဖြစ် အသုံးပြုဖို့ ထိုင်းအစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးပါပြီလို့လည်း သူက ပြောသွားပါသေးတယ်။
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ခံထားရတဲ့ စုစုပေါင်းလူအရေအတွက်ရဲ့ ၄၀% လောက်ထိဟာ ကလေးငယ်တွေဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ အခု
လာမယ့် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့မှာ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့မယ်လို့ စစ်အစိုးရက ကြေညာ
လိုက်တာဟာ ကျောင်းတွေကို ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေအဖြစ် အသုံးပြုနေရတဲ့
အပေါ်မှာရော၊ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ကလေးငယ်တွေ ပညာဆက်သင်ကြားနိုင်မှု အခြေ
အနေပေါ်မှာရော သက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ်များ အရေး
ပေါ် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီး ရှန်သာ ဘလိုးမန်း
(Shantha Bloemen) က ဇွန်လ ၂ ရက်ဆိုတာ အရမ်းကိုနီးကပ်လွန်းပါတယ်လို့ဆိုပြီး သူတို့ပြင်ဆင်နေတာတွေကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
“ရွက်ဖျက်တဲတွေ၊ တခြားအခြေခံလိုအပ်တဲ့ ကိရိယာတွေနဲ့ ယာယီကျောင်းတွေ
ဆောက်ဖို့ ကျမတို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းမှာ ကျောင်းတွေအတွက် အထောက် အကူပြုပစ္စည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ နေရာဒေသအားလုံးအတွက် မဟုတ်တာက
တော့ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ကို ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီး မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်မြို့တွေမှာ ကျောင်းတွေဖွင့်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်လို့ ကျမတို့ယူဆပါတယ်။” ဆိုပြီး ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီး ဒေါက်တာ မော်ရင်းန်
ဘာမင်ဟမ်မ် (Dr. Maureen Birmingham) ကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ သူက လပွတ္တာမြို့ကို နမူနာထားပြီး ပြောသွားရာ
မှာ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်စက်လို အဓိက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာတွေ
ဟာ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ပြီး ပျက်စီးသွားခဲ့တာကြောင့် ဒါတွေကို အရေးတကြီး လိုအပ်နေ
IFRC နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီနဲ့ လခြမ်းနီအသင်းများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး အကြံ
ပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဂျွန် စပဲရိုး (John Sparrow) က သူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ လေယာဉ်
၂၆ စင်းစာ ပစ္စည်းတန်ချိန် ၃၀၀ ကျော်ကို ပေးပို့နိုင်ခဲ့ပြီးပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီသီတင်း
ပတ်မှာ ဒီ့ထက်ပိုများတဲ့ အရေအတွက်ကို ပေးပို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း
ITU နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးဖုံး အလုံး ၁၀၀
ကို နေရောင်ခြည်ကနေ လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်ယူတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့အတူ ပေးအပ်
ခဲ့တဲ့အပြင် ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုလည်း စေလွှတ်ခဲ့တယ်လို့ ITU အဖွဲ့က မစ္စ အွန်-ဂျုး
ကင်မ်က (Ms. Eun-Ju Kim) ကပြောပါတယ်။ ဒီကျွမ်းကျင်သူတွေဟာ မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတွေ ပြန်လည်ပတ်နိုင်ရေး ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးကြ
မှာပါတဲ့။ ဒီဂြိုဟ်တုဖုံးတွေကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကို ပေးအပ်ခဲ့တာ
ဖြစ်ကြောင်းလည်း မစ္စ အွန်-ဂျုး ကင်မ်က ပြောသွားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးမှူး မစ္စတာ
ဂျွန် ဟုမ်းစ် (John Holmes) ဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာ မနေ့က စရောက်နေပါတယ်။ ဒီကနေ့
မှာ သူဟာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို သွားရောက်ပြီး ဘာတွေကူညီထားတယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာ လူသားဘေးဒုက္ခဆိုင်ရာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး
အဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာတော့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေထဲက အဓိက
ကျတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ကြိုးစားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ တိတိကျကျ မသိရသေးပါဘူး။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ဆိုင်ကလုံးဒဏ်သင့် ပြည်သူလူထုအတွက် ၀မ်းနည်းခြင်းအထိမ်း
အမှတ် အင်္ဂါနေ့မနက် ကိုးနာရီကစပြီး သုံးရက်ကြာ နိုင်ငံတော်အလံကို တိုင်ဝက်လွှင့်
ထူဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရက မကြာခင်နာရီပိုင်းမှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ငလျင်ဒဏ်သင့်ပြည်သူတွေအတွက် သုံးရက်ကြာ ၀မ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ကာလ
ကို တနင်္လာနေ့က စတင်မယ်လို့ တရုတ်အစိုးရက ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်မှာမှ မြန်မာ စစ်အစိုးရကလည်း အခုလို ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဆိုင်ကလုံးဒဏ်သင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခရီးထွက်ခွာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တွေကို ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ
က ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းနေတဲ့၊ သိပ်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ ဆိုရမယ့် အကူအညီတွေကို လက်ခံဖို့ မြန်မာစစ်
အစိုးရကို နားချနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကို သွားရောက်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ
အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) ဟာ ဒီနေ့ နယူးယောက်ခ်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ရှိပါတယ်။
နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ အာဆီယံအသင်းကြီးတို့
ပူးတွဲ ကမကထပြုပြီး မုန်တိုင်းဘေးကယ်ဆယ်
ရေး နိုင်ငံတကာ အကူအညီကောက်ခံရေး နိုင်ငံတကာညီလာခံတရပ်ကိုလည်း မြန်မာ
နိုင်ငံမှာ မေလ ၂၅ ရက်နေ့ကျရင် ကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကို ဒေါ်လှလှသန်းက စုစည်းတင်ပြ
ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ် သောကြာနေ့က ကုလသမဂ္ဂမှာ တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးကျင်းပ
ခဲ့စဉ် ကုလသမဂ္ဂဟာ နိုင်ငံရေးထက် ကယ်ဆယ်ရေးကို ဦးစားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့
တဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီနေ့ ခရီး
ထွက်ပြီး ကြာသပတေးနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဆိုက်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကိုဆိုက်ရောက်တဲ့အခါ နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဒဏ် အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့
ဒေသတွေကို အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့ သူ့ရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မစ်ရှဲလ်
မွန်းတပ်စ် (Michelle Montas) က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ခရီးစဉ်ရဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ မစ္စ မွန်းတပ်စ်က …
“သူ့ရဲ့ ဦးတည်ချက်က လက်ရှိကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လိုအားဖြည့်ပေးနိုင်
မလဲ၊ နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကို ဘယ်လိုတိုးပြီး
ဆောင်ရွက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မလဲ၊ မုန်တိုင်းဒဏ် အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ ဒေသတွေကို
ရန်ကုန်ကတဆင့် ဘယ်လိုအထောက်အကူတွေ သိသိသာသာကြီး တိုးပေးနိုင်မလဲ၊ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဘယ်လိုအချက်တွေ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်း” မစ္စ မွန်းတပ်စ်က ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေကို ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာ အဟန့်အတားတွေအနက် တခု
ကတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရက အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံက ကယ်ဆယ်ရေး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပေးဖို့ ငြင်းဆိုနေတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရော တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲ ဗီဇာလျှောက်ထားခဲ့ရပါသလားလို့ သတင်းထောက်တဦးက မေးမြန်းရာမှာတော့ ဗီဇာရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ နယူး
ယောက်ခ်ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ သွားရောက် တာဖြစ်ကြောင်း မစ္စ မွန်းတပ်စ်က ဖြေကြားသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့တော့ ဒီကနေ့အထိ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်စကားပြောခွင့် မရသေးပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ
အကြီးအကဲ ဂျွန်ဟုမ်းစ် (John Holmes) ယူဆောင်သွားတဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ တတိယမြောက်စာကိုတော့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေထံကို ပါးပြီးဖြစ်တယ်လို့ ကုလ
သမဂ္ဂ ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးက ပြောကြားသွားပါတယ်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သောကြာနေ့အထိ နေထိုင်မှာဖြစ်ပြီး မေ
၂၃ ရက်နေ့မှာတော့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ
တယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ မေ ၂၅ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် ကုလသမဂ္ဂ၊
အာဆီယံ အလှူငွေကောက်ခံတဲ့ ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က
အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ ဘန်ကောက်ကို ခေတ္တသွားရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မေ
၁၀ ရက် ပြည်လုံးကျွတ်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ မကျင်းပလိုက်ရတဲ့ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ၄၇
မြို့နယ်တို့မှာ နောက်ဆက်တွဲ ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပချိန်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ မရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းထောက်တဦးကတော့ အတွင်း
ရေးမှူးချုပ် အခုလို မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိစဉ် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပတာကို လေ့လာ စောင့်ကြည့်သင့်တယ်လို့ အကြံပေးသွားတာ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နေအိမ်
အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့
ရော အတွင်းရေးမှူးချုပ် တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါသလားလို့ သတင်းထောက်တဦးက မေးမြန်းခဲ့ရာ
မှာတော့ လက်ရှိခရီးစဉ်မှာ လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အကူပေးရေး ခရီးစဉ် သက်သက်သာဖြစ်တယ်လို့ မစ်ရှဲလ်မွန်းတပ်စ်က ဖြေကြားသွားပါတယ်။
“အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေကို သွားရောက်တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါ
တယ်။ ဒီခရီးစဉ်ဟာ လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အကူပေးရေး ခရီးစဉ်သက်သက်
သာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ မစ္စ မွန်းတပ်စ်က ဖြေကြားသွားပါတယ်။
မစ္စတာဘန်အနေနဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ရန်ကုန်ကိုပြန်လာပြီး ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အာဆီယံတို့
ပူးတွဲကျင်းပတဲ့ အလှူရှင်ညီလာခံကို တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်း
ရေးမှူးချုပ်နဲ့ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတို့ တနင်္ဂနွေနေ့ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက်မှာ
တော့ မြန်မာမုန်တိုင်းဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် သွေးစည်းခိုင်မာမှု ပြသတဲ့အနေနဲ့
ရန်ကုန်မှာ မေ ၂၅ ရက်နေ့ကျင်းပမယ့် အစည်းအဝေးပွဲကို ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ
များရဲ့ ၀န်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းဒဏ် ကယ်ဆယ်
ရေးအတွက် ရေတိုရေရှည်ထူထောင်ရေး ကြိုးပမ်းနိုင်ဖို့ ငွေကြေးအထောက်အကူကို ဦးစားပေးကောက်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
မစ္စတာဘန်ရဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ ဂျွန်ဟုမ်းစ်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့
တနင်္ဂနွေနေ့က မြန်မာနိုင်ငံကို ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီး တနင်္လာနေ့မှာတော့ မုန်တိုင်းဒဏ် အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ လပွတ္တာအပါအ၀င် ဒေသ ၃ ခုတို့ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး
မြန်မာအစိုးရ အရာရှိတွေနဲ့ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့ မစ်ရှဲလ် မွန်းတပ်စ်က ပြောသွား
ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ
လာမယ့် တနင်္လာနေ့မှာ နယူးယောက်ခ်ကို ပြန်လည်ထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း
Myanmar Agrees to Allow Aid Efforts by Neighbors
A transport plane flew overatemple near Myanmar's capital of Yangon on Saturday.
BANGKOK — Myanmar agreed Monday to let its Southeast Asian neighbors help coordinate foreign relief assistance for cyclone victims, bending somewhat to international pressure to allow more outside aid, Singapore’s foreign minister, George Yeo, said.But the supply of aid and the entry of relief workers from countries outside the Southeast Asian bloc will continue to be limited, he said.
ASEAN to lead Burma aid effort in SG
Burma's Foriegn Minister U Nyan Win (L) with Singapore's George Yeo (AP)
The South East Asian grouping, ASEAN, says Burma will accept medical workers from its member countries to help cyclone victims.
Atameeting in Singapore, foreign ministers from the region agreed that ASEAN would coordinate the relief effort.
Until now, Burma's military government has allowed very few foreign aid workers into the country.
Before the meeting, the Malaysian foreign minister, Dr Rais Yatim, told the BBC there wasatremendous sense of frustration about aid not getting in to Burma, but he added that little could be done without the cooperation of the authorities there.
The Burmese authorities say nearly seventy-eight thousand people died in the cyclone.
Tibetan Freedom Torch marched through Toronto during worldwide trek to Tibet
A group of burmeses supported foramarch with the Tibetan Freedom Torch in downtown Toronto yeaterday.Also we collected some money for Nargis victims relief there.
Young girl Tsering Lama is always support all Burmese freedom actions.
So we are here together against China and to free both of countries.
TORONTO - Protesters gathered outside Toronto's Chinese Consulate on Sunday morning foramarch with the Tibetan Freedom Torch - the symbolic foil to the Olympic torch, which made it's final stop in Canada before continuing its worldwide trek to Tibet. About 150 supporters marched through downtown Toronto in the rain to add their voices to the chorus of worldwide support to have Tibet freed from Chinese control. The torch began its global tour in March in Athens and Olympia, Greece - the site of the first Olympics Games - and will eventually stop in 50 cities before reaching Tibet on the eve of the Summer Olympics in Beijing. The torch has already passed through several European countries and visited Victoria, Vancouver, Calgary, Ottawa and Montreal before Toronto's event, which was an appropriate site for the final Canadian rally, said Tsering Lama of the group Students foraFree Tibet Canada. "Toronto is actually one of the largest exile populations in the world - about 5,000 of us here - so this isamajor centre of major refugee settlements and so this isabig day for us because we're celebrating our movement," she said. The march was led by torch-bearer Tsering Dolma, who was born in Tibet in 1929 but fled to Canada with her four children as refugees in 1972. Through an interpreter, Dolma said the torch exists to raise awareness about Tibet's struggles as China prepares to play host to the world at the Olympics. "The Beijing government has used (the Olympic torch) and taken it all around the world to try to show the people that the Tibetan people are happy under Beijing occupation and Tibet isapart of China - that's not the truth," she said. "The Tibetan Freedom Torch is an expression of our undying hope and our undying aspirations for freedom and human rights and justice in Tibet." The torch will next visit several eastern U.S. cities before heading to Uruguay, Australia, Mexico, Taiwan and India.
တိဘက်လူငယ်များမိုးရွာထဲတွင် Freedom Torch ကိုင်ဆောင်၍မြို့တော်ခန်းမသို့ချီတက်လာစဉ်။
ွှTSERING LAMA(National Director of Studentsforafreetibet.ca)
>>>>free Tibet...free Burma
အောင်သက်ဝိုင်း/ လပွတ္တာ| မေ ၁၉၊ ၂၀၀၈
မေလ ၁၄ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီအချိန် လပွတ္တာမြို့မှာ မိုးက သည်းသည်းမည်းမည်းရွာနေတယ်။ရွှေဝါရောင်သုတ်ထားပြီး ခိုင်ခန့်ထူထဲလှတဲ့ သကျမာရဇိန်ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကြီးမုခ်ဦးရှေ့မှာ ရေစိုပြီး ညစ်ထေး စုတ်ပြတ်နေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေနဲ့ လူကြီး၊ ကလေး ရာပေါင်းများစွာသော လူအုပ်ကြီးဟာ တစုံတခုကို ညှိုးငယ်တဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။
တ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ ရွာနေတဲ့မိုးကြောင့် ကလေးတွေရော လူကြီးတွေပါ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင်ချမ်းနေကြတယ်။ ပဲကြီးရေလို တွန့်နေတဲ့ သူတို့ လက်တွေကို အချင်းချင်းပွတ်နယ်ရင်း အချမ်းဒဏ်ကို အံတုနေတဲ့ကြားက သူတို့မျက်နှာတွေက ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတယ်။ သူတို့မျက်လုံးတွေကတော့ ဘုရားမုခ်ဦးရှေ့မှာရှိတဲ့ အပြာရောင်မိုးကာဖျင်တဲတွေကို တူညီစွာမျှော်ကြည့်နေကြပါတယ်။
သူတို့ဆိုတာ မေလ ၂ ရက်နေ့က ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် မိသားစုဝင်တွေ သေကြေ၊ အိုးအိမ်တွေပျက်စီး စွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့ လပွတ္တာမြို့နယ်အပိုင် ကျေးရွာတွေက ဒုက္ခသည်တွေ ဖြစ်ပြီး သူတို့မျှော်လင့် စောင့်ဆိုင်းနေကြတာကတော့ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကြီးရှေ့က လပွတ္တာမြို့သားတွေ စုပေါင်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းက ရိက္ခာဝေမယ့်အချိန်ကိုပါ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ “ဘုရားရှေ့မှာစုရုံး စုရုံးလုပ်မနေကြပါနဲ့။ ဆန်လှူမယ့်သူလာရင် ဆန်ချက်ချင်း ဝေပေးပါ့မယ်။ ဆန်ဝေရင်လည်း အသံချဲ့စက်နဲ့ အော်ပြောပေးပါ့မယ်။ လမ်းမပိတ်ကြပါနဲ့” ဆိုတဲ့အသံက လော်စပီကာ ကနေ ပီသစွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေက မိုးသည်းထဲမှာ ရပ်မြဲတိုင်းရပ်၊ စောင့်မြဲတိုင်း စောင့်နေကြပါတယ်။
တနာရီကျော်ကြာလာသည့်တိုင် မနက် ၉ နာရီအထိ ဆန်ပေးဝေနိုင်ခြင်းမရှိသလို ဆန်ရဖို့လာရောက် စောင့် ဆိုင်းရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေသာပိုပိုများလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ များပြားလှတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ မျက်လုံးတွေ က အ၀ါရောင်သန်းနေပြီး မျက်ကွင်းတွေက အမည်းရောင်အရစ်လိုက် ပေါ်လွင်နေတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ သူတို့တွေမှာ အားအင်တွေကုန်ခမ်းနေတယ်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်တွေက သက်သေခံနေ ပါတယ်။
ဒီနေ့အတွက် ဆန်လှူမယ့်သူ မလာသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့လည်း သူတို့အတွက်ဝေဖို့ လောလောဆယ် ဘာမှမရှိသေးဘူး။ မနေ့ကလှူသွားတဲ့ ဆန်ထဲက ဝေပြီးလို့ကျန်တဲ့ ဆန်တွေကို ဆန်ပြုတ် ပြုတ်ပေးထား ပါတယ်။ အဲဒါ မနက်၁၁ နာရီလောက်ကျရင် ဆန်ပြုတ်ဝေမှာပါ” လို့ သကျမာရဇိန် ဆုတောင်းပြည့် ဘုရား ၀န်းအတွင်းက ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ပုဂ္ဂလိကအလှူရှင်တွေဆီက ဆန်အလှူခံ ဝေမျှပေးနေ တဲ့လပွတ္တာ မြို့ခံ တဦးကဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့မနက်အတွက် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့မနက်စာဟာ အရည်ကျဲကျဲဖြစ်နေတဲ့ ဆန်ပြုတ်ပဲဆိုတာသေချာ သလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဆန်ပြုတ်ဆိုတာတောင် အ၀သောက်ရမှာမဟုတ်ဘဲ တဦးကိုဖန်ခွက်တခွက်စာ လောက်ပဲရမှာပါ။ ဒီဆန်ပြုတ်ခွဲတမ်းကိုရဖို့တောင် ဒုက္ခသည်တွေ အချိန်တော်ကြာ စောင့်ဆိုင်းရမယ့် အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။
ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားဝန်းအတွင်းကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ အမိုးအကာလုံခြုံတဲ့ ဘုရားတန်ဆောင်း အတွင်းမှာ
ဒုက္ခသည် တထောင်ကျော် စုပြုံကြိတ်တိုးနေကြပါတယ်။ မိုးကလည်း သည်းသထက် ပိုသည်းလာပါတယ်။ ဘုရားတန်ဆောင်း အတွင်းမှာ လူတွေကြပ်သိပ် နေတဲ့အတွက် နေလို့မရနိုင်တော့တဲ့ ကျန်ဒုက္ခသည် ထောင် ပေါင်းများစွာက ဘုရားပရ၀ဏ်အတွင်းမှာ ရရာ သွပ်ပြားတွေ၊ မိုးကာဖျင်အပြဲစတွေ၊ ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ အမိုး အကာလုပ်လို့ သည်းထန်စွာရွာနေတဲ့ မိုးကိုအံတုနေကြပါတယ်။ သူတို့အားလုံးရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ မိုးရေ တွေ က ရွှဲနစ်နေပြီး အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်တွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကအပြာရောင် သန်းနေပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အပေါက်အဖာတွေ များပြားလွန်းတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကလည်း မိုးရေကြောင့် စိုစွတ်နေ ပါ တယ်။ လက်နှစ်ဘက်ကို အာငွေ့ပေးရင်း မလုံခြုံတဲ့ အမိုးအကာတွေအောက်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အများအပြားရှိသလို တချို့ဒုက္ခသည်တွေကတော့ မိုးကာထားတဲ့ သွပ်ပြားတွေအောက်မှာ
မီးဖိုဖို့ကြိုးစားရင်း အချမ်းသက်သာအောင် အနွေးဓာတ်ရှာနေကြပါတယ်။ ဒီလိုအမိုးအကာ မလုံခြုံတဲ့ အောက်မှာ ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး ရွှဲစိုနေပေမယ့် ရင်သွေးငယ်ကို နို့တိုက်နေတဲ့ သားသည်မိခင်တဦးရဲ့ မြင်ကွင်း က မြင်ရသူတိုင်းကို ထိခိုက်ကြေကွဲစေပါတယ်။
“သကျမာရဇိန် ဘုရားဝန်းမှာ ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း ၂၄၄၇ ဦးရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်စု ၅၃၄ စု၊ ၅ နှစ်အောက် ကလေး ၂၂၁ ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒီဒုက္ခသည်စခန်းက လပွတ္တာမြို့နယ်မှာ ဒုက္ခသည် အရေအတွက် အများ ဆုံး ပါပဲ” လို့ ဒုက္ခသည်ခေါင်းဆောင် တဦးက ရှင်းပြပါတယ်။
ဒုက္ခသည် အများစုက မိသားစု ဆွေမျိူးသားချင်း မရှိတော့တဲ့ သူတွေဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး ၁၂ ရက် ကျော်ကြာလာတဲ့ထိ ဆန်ရိက္ခာအကူအညီ အနည်းငယ်ကလွဲရင် တခြားအကူအညီတွေ ဘာမှမရသေးဘူးလို့
သိရပါတယ်။ တခါတလေ အစိုးရဗိုလ်ချုပ်တွေ လာရောက်စစ်ဆေးတဲ့ နေ့ဆိုရင်တော့ ယမ်ယမ်ခေါက်ဆွဲ တထုပ်ဆီရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သောက်သုံးရေအတွက် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်က ကလိုရင်းဆေး ထည့်ထားပေးတဲ့ လပွတ္တာမြို့ပေါ်က ရေတွင်းနဲ့ သောက်ရေကန်တွေမှာ ဒုက္ခသည်တွေကိုယ်တိုင် သွားရောက်ခပ်ယူရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“မနေ့ကတော့ တယောက်ကို ဆန် ၂ လုံးစီရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆန်က နေ့တိုင်းမရဘူး။ မရတဲ့နေ့ကျရင် ဆန်ပြုတ်ပေးတဲ့နေရာတွေဆီမှာ ဆန်ပြုတ်သွားတန်းစီရတယ်” လို့ လပွတ္တာမြို့နယ် အထက်တန်းကျောင်း အမှတ် ၁ မှာခိုလှုံနေတဲ့ အသက်၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိ အိမ်ရှင်မတဦးက ကျနော့်ကို ရှင်းပြပါတယ်။ ဆန်ပြုတ် တန်းစီတဲ့ နေရာမှာတောင် ထည့်စရာပန်းကန်မရှိလို့ လမ်းဘေးက ရရာ ပလတ်စတစ်အိတ်ကို မိုးရေနဲ့ ပြောင်အောင်ဆေးပြီး ယူသွားရတယ်လို့ အဲဒီအမျိုးသမီးက ကျနော့်ကို ပြောပြတယ်။
လပွတ္တာမြို့ပေါ်က ဒုက္ခသည်တွေအတွက် စားနပ်ရိက္ခာကို ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်က ဦးဆောင်နေတယ် လို့သိရပါတယ်။ လပွတ္တာမြို့နယ်မှာ ကုလသမဂ္ဂဦးဆောင်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းတွေ အားလုံးဟာ အဖွဲ့တခုအသွင်ပြောင်းပြီး ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ရိက္ခာ၊ အ၀တ်အထည်၊ ဆေးဝါး၊ သောက်ရေတွေ ရရှိအောင် အရေးပေါ် ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ လပွတ္တာမြို့နယ်ကကုလသမဂ္ဂ ၀န်ထမ်းတဦးက ရှင်းပြပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေလက်ထဲမှာတော့ ကုလသမဂ္ဂက ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အရေးပေါ် ကူညီတဲ့ ဆန်ကြမ်းအနည်းငယ်ကလွဲရင် ဘာဆိုဘာမှ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။
လပွတ္တာမြို့နယ် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်က ၀န်ထမ်းတဦးက “လပွတ္တာမြို့ပေါ်မှာ ဒုက္ခသည် စခန်းစုစုပေါင်း ၄၉ ခုရှိပါတယ်။ ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း ၃၃၈၈၇ ဦးရှိတယ်။ တနေ့ကို ဒုက္ခသည်အားလုံး အတွက် ဆန်တန်ချိန် ၃၆ တန် (၇၂၀ အိတ်) နှုန်းပေးနေပါတယ်။ တဦးကို တနေ့ ၅ ကီလို (နို့ဆီိဘူး ၂ ဘူး) နှုန်းနဲ့ပေးနေပါတယ်။ ဆန်ကတော့ မြောင်းမြမြို့နဲ့ အနီးတ၀ိုက်က ၀ယ်ထားတဲ့ ဆန်တွေပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီဝန်ထမ်းက ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဆန်ရိက္ခာ နေ့စဉ်ပေးနေတယ်လို့ ဆိုပေမယ့်လည်း ဒုက္ခသည် တွေ ကတော့ ဆန်နေ့တိုင်း မရသလို ရတဲ့ဆန်တွေဟာလည်း မီးဒုံးဆန် အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆန်ကြမ်းအနည်းငယ်က လွဲပြီး တခြားအကူအညီ မရရှိဘူးလို့လည်း သိရတယ်။ လောလောဆယ် အ၀တ် အထည်၊ ခြုံစောင်နဲ့ အမိုးအကာတွေ အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်၊ ရိက္ခာအနေနဲ့ ဆန်အပြင် ဟင်းစား တွေ လည်းပေးအပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
“မနေ့က တနေကုန်နဲ့ တညလုံး မိုးတွေသည်းသည်းမည်းမည်း ရွာတယ်။ တညလုံး ဘယ်လိုမှ အိပ်လို့မရဘူး။ အမိုးအကာမရှိတော့ ဘယ်သူမှမအိပ်ရဘူး။ အ၀တ်တွေကလည်းစို၊ လဲစရာက မရှိတော့ အားလုံး ငုတ်တုတ် ထိုင်နေရတယ်။ တညလုံးပဲ။ မနက်မိုးလင်းတော့လည်း မိုးကဆက်ရွာနေတော့ ကလေးတွေ ဆိုရင် အအေး တွေပတ်ပြီး ဖျားကြတယ်” လို့ အထက ၁ ကျောင်းမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေက ပြောပြပါတယ်။
လပွတ္တာမြို့ ကုလသမဂ္ဂ၀န်ထမ်းကတော့ “ကျနော်တို့ ၀န်ထမ်းတွေကတော့ ရှိတာတွေ၊ ရနိုင်တာတွေ ပေး နေတယ်။ ခက်တာက ဒုက္ခသည်တွေက လူမြင်ရင် အကူအညီတွေမရဘူး။ ဆန်မရဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ အကျင့် မကောင်းဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ လူစိမ်းမြင်တိုင်း သူတို့ကို အကူအညီပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်နေတယ်။ ပင်လယ်နားနီးလာလေ အကျင့်မကောင်းလေပဲ” လို့ ကျနော့်ကိုပြောပြတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဆင့်မြင့်ဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ဒုက္ခသည်တွေအပေါ် ပြောကြားချက်က ရင့်သီး လွန်းလှပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီတွေပေးနေတဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းနေပါတယ် ဆိုတဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံး မြင့်မြတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းလို့ မှတ်ယူပြောဆိုနေကြတဲ့ ကုလသမဂ္ဂက သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ ဘယ်လိုများ လေ့ကျင့်ပေးထားသလဲဆိုတာ စဉ်းစာစရာပါပဲ။ မြန်မာတဦးဖြစ်ပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂမှာ ဒေါ်လာနဲ့ အလုပ်ရနေလို့ ကိုယ့် မြန်မာတွေအပေါ် လူစိတ်များ ပျောက်သွား လေသလား ဆိုတဲ့ မေးစရာမေးခွန်းတွေက တသီတတန်းကြီးပေါ်လာပါတယ်။
လပွတ္တာမြို့နယ်ပေါ်မှာ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့၊ ကုလသမဂ္ဂ ကလေး များရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးအဖွဲ့၊ မာလင်၊ မော်တီဆာ၊ နယ်စည်း မခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ (ဟော်လန်) အပါအ၀င် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အများအပြား ၀င်ထွက်သွားလာနေပါတယ်။
တမြို့လုံးမှာသူတို့ရဲ့ လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကားကောင်းကြီးတွေ၊ အဖွဲ့အစည်း အသိအမှတ်ပြု အင်္ကျီတွေ၊ တံဆိပ်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး အမှတ်အသားတွေ ၀တ်ဆင်သွားလာ နေကြတဲ့အပြင် မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ တည်းခိုခန်းတွေမှာ သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ပြည့်နေတယ်။ဒါပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေအတွက် မိုးရွာချိန်မှာ အမိုးအကာအောက် နေနိုင်ဖို့တောင် သူတို့ မလုပ်ဆောင် နိုင်ကြပါဘူး။ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေ လပွတ္တာမှာ ဘာလာလုပ်နေသလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ရမယ့် အချိ်န်ပါပဲ။ ဘာအခက် အခဲတွေကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ နှောင့်နှေးရပါသလဲ။
လပွတ္တာမြို့နယ်ပေါ်က ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ သပိတ်ကြိုဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စက်တော်ရာဘုန်းကြီး ကျောင်း၊ လေးထပ်ကျောင်း၊ သရက်တောကျောင်း၊ အထက ၁ ၊ အထက ၂၊ မင်းကျောင်း၊ နန္ဒ၀န်ကျောင်း၊ မြို့လယ်ကျောင်း၊ ကျိုက်ထီးရိုးကျောင်း၊ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား အပါအ၀င် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း ၄၉ ခုလုံး မှာ အမိုးအကာ မဲ့နေပါတယ်။ မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး ၁၂ ရက်ကြာတဲ့ အချိန်အထိ ၄၉ ခုသော ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေလုံခြုံအောင် မလုပ်ပေးနိုင်သေးပါဘူး။ အန်ဂျီအိုတွေလည်း မလုပ်ပေးနိုင်သလို အစိုးရကလည်း ဘာမှမလှုပ်ရှားသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လပွတ္တာမြို့နယ်အ၀င်မှာတော့ အပြာရောင် ရွက်ဖျင်တဲ အလုံး ၁၀၀ လောက်တွေ့ရပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်လာတုန်းက ဆောက်ပေးသွားတဲ့ တဲတွေလို့ မြို့ခံတွေဆီက သိရပါတယ်။ ရွက်ဖျင်တဲနဲ့ နေခွင့်ရတဲ့ ဒုက္ခသည် ရာဂဏန်းလောက် အတွက်တော့ ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရ ပေမယ့် ဒုက္ခသည် ထောင်ပေါင်းများစွာကတော့ မိုးရေထဲမှာ အအေးဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆို တာ သေချာလေ့လာမှသိနိုင်မှာပါ။လပွတ္တာမြို့ပေါ်မှာ ဒုက္ခသည်လူဦးရေ ၃၅၀၀၀ နီးပါးရှိပြီး မြောင်းမြမှာ လပွတ္တာက လွှဲပေးလိုက်တဲ့ ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၄၀၀၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ လပွတ္တာမြို့နယ် မယက ဝန်ထမ်း တဦးကဆိုပါတယ်။
မြောင်းမြမှာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၂၆ ခုရှိုပြီး ဒုက္ခသည်တွေကို မိသားစုလိုက် နေခွင့်မပေးဘဲ မိန်းမ၊ ယောက်ျား ခွဲခြားထားပြီး ညနေ ၆ နာရီကျော်ချိန်မှာ အပြင်ထွက်ခွင့် မပေးဘူးလို့ မြောင်းမြမှာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဒုက္ခသည်တဦးက ဆိုပါတယ်။
“မြောင်းမြမြို့က ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ယောက်ျားသက်သက် မိန်းမသက်သက်ထားတယ်။ မိသားစုရှိတဲ့ သူတွေက နေ့ဘက်မှာတွေ့ပေါ့။ ညဘက်ကျရင်တော့ စခန်းတွေကို ပိတ်ထားတယ်။ အကျယ်ချူပ် သဘော ပေါ့” လို့ စလူဆိပ်ဒိုင်နယ်(ကျေးရွာအုပ်စု)က ဒုက္ခသည်တဦးက ဆိုပါတယ်။
လပွတ္တာမြို့နယ်အပိုင် ကျေးရွာစုစုပေါင်း ၅၀၈ ရွာရှိပြီး ရေဝေ၊ သပြေချောင်း၊ လွှစာ၊ စလူဆိပ်၊ ဗိုင်းတောင့် ချောင်း၊ အမှတ်(စုပေါင်း)၊ ရေတွင်းဆိပ်၊ ကမလာ၊ ပြင်တောင်တွင်း၊ ညောင်ပင်သာ၊ သင်္ဃန်းကြီး၊ သင်္ဃန်း လေး အပါအ၀င် ကျေးရွာအုပ်စုကြီး (ဒိုင်နယ်) ၅၉ ခုရှိပြီး ကျေးရွာဒိုင်နယ်တခုမှာ ကျေးရွာပေါင်း အနည်းဆုံး ၂၀ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျေးရွာအုပ်စုတခုမှာ လူဦးရေ ၃၀၀၀ ကစလို့ လူဦးရေ တသောင်းကျော် ရှိပါတယ်။ မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး ၁၂ ရက်အကြာ အာဏာပိုင်တွေ လျှို့ဝှက်ပြုစုထားတဲ့ စာရင်းမှာဆိုရင် လူဦးရေ ၄၅၀၀၀၀ နီးပါးရှိတဲ့ လပွတ္တာ မြို့နယ်အပိုင် တ၀ိုက်မှာ လူဦးရေ ၁၂၀၀၀၀ နဲ့အထက် သေဆုံးတယ်လို့ လပွတ္တာ မယက ဝန်ထမ်းတဦးက စာရင်းဇယား တွေကို ပြသပြီး ပြောပြပါတယ်။
“ပြင်စလူဆိုတာ အရင်တုန်းက ဒိုင်နယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကမှ မြို့နယ်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာ။ လပွတ္တာမြို့နယ်ရဲ့ မြို့နယ်ခွဲအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ ပြင်စလူမှာ လူဦးရေ ၄၀၀၀ ကျော်နေတဲ့ အထဲက မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးနောက် လူဦးရေ ၃၅၈ ဦးပဲအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့တယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ သေ ကုန်ပြီ။ ပြင်စလူမြို့မှာ အခုထက်ထိ မမြှုပ်ရသေးတဲ့အလောင်းတွေ အများကြီးပဲ”လို့ အဲဒီလပွတ္တာ မယက လူကြီးက ဆိုပါတယ်။
မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး ၁၀ ရက်အကြာမှာ အန်ဂျီအိုတွေနဲ့ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေက အသက်ရှင်လျက် ကျန်ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ရှာဖွေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ရပ်ထားလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“လပွတ္တာမြို့နယ်၊ ဘီတွတ်ကျေးရွာ အကျော်က ရွာတွေမှာ ဒုက္ခသည်တွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆားချက်တဲ့သဘောင်္ အဲဒီဘက်က ဖြတ်တော့ လူတွေက ကုန်းပေါ်ကနေ ရေပေးဖို့ လှမ်း တောင်းကြတယ်။ လူတွေအရမ်းများတော့ ကမ်းကို မကပ်ရဲဘူး။ ၀င်လုမှာစိုးလို့ သဘောင်္ကို စက်ကုန်ဖွင့်ပြီး လပွတ္တာကို ပြန်ခဲ့ရတယ်” လို့ လပွတ္တာမြို့နယ်အခြေစိုက် ဆားချက်လုပ်ငန်းတခုက ရေလုပ်သား တဦးက ဆိုပါတယ်။
အဲဒီရေလုပ်သားကပဲ “အလောင်းတွေဆိုတာ ရေစီးအရမ်းသန်တဲ့ ပျံလွှားမြစ်ကြီးထဲမှာတောင် အများကြီးပဲ။ ရာဂဏန်း၊ ထောင်ဂဏန်းနဲ့ကိုတွေ့ရတာ။ အပုပ်နံ့တွေဆိုတာကတော့ ထောင်းနေတာပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
လပွတ္တာမြို့ဆိပ်ကမ်းတွေမှာတောင် နေ့တိုင်း ပုပ်ပွနေတဲ့ အလောင်းတွေတွေ့နေဆဲဖြစ်ပြီး အဲဒီလို လူသေ အလောင်းတွေကြောင့် မြို့ခံတွေအကြားမှာ ငါးပုစွန်စားသုံးမှု လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ဒီလောက် အလောင်းတွေများနေတာ ဘယ်သူမှ ငါးပုစွန်တွေ မစားရဲဘူး။ ငါးသည်၊ ပုစွန်သည်တွေလည်း ဈေးမှာမရှိဘူး” လို့ မြို့ခံတဦးက ဆိုပါတယ်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ လပွတ္တာမြို့နယ်အပိုင် ကျေးရွာတွေက ဒုက္ခသည်တွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်နေပါတယ်။ ဒီဒုက္ခသည်တွေကို အန်ဂျီအိုတွေ၊ အာဏာပိုင်တွေဘယ်သူတွေကမှ လာပြီးမနှစ်သိမ့်ပါဘူး။
ဒုက္ခသည်တွေ အခြေချနေထိုင်တဲ့ အမှတ် ၁ အထက်တန်းကျောင်းကို ၀င်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ အားလုံးရဲ့ မျက်နှာတွေက ကျနော့်ကို မျှော်လင့်ချက် မျက်လုံးတွေနဲ့ လှမ်းကြည့်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကျနော် ဟာ ကယ်တင်ရှင်တယောက်လို့ မျှော်လင့်ပုံရပါတယ်။ ကျနော် ဒုက္ခသည် ကလေးတဦးကို ရန်ကုန်က ပါလာ တဲ့ နိုင်ငံခြားဖြစ် ဘီစကစ်ထုပ်ကြီးတခု လှမ်းပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ ဒုက္ခသည် ကလေးတွေ၊ လူကြီးတွေ ၅၀ လောက်ကျနော့်နားကို ၀ိုင်းအုံလာပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့်ကို သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ အခုလတ်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို မေးစရာမလိုဘဲ ပြောပြကြပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေက သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို နားလည်နိုင်မယ့်သူ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။ သူတို့ကို နှစ်သိမ့်မယ့်သူ၊ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို နားလည်စာနာ နားထောင်မယ့် သူတွေ အရေးပေါ် လိုအပ် နေပါ တယ်။ ဒုက္ခသည်တွေကို ဆန်ကြမ်းပေးရုံ၊ ဆေးတခွက် နှစ်ခွက် ပေးရုံနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း မမည်ဘူး ဆိုတာ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။
လက်ရှိ လပွတ္တာမြို့ပေါ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ အမိုးအကာတွေမရှိတဲ့အတွက် ဒုက္ခသည်တွေအများစု မိုးမိပြီး နမိုးနီးယားရောဂါနဲ့ ၀မ်းဖောဝမ်းရောင် ရောဂါ ခံစားနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေး ငယ်တွေမှာ ဒီရောဂါခံစားရတာကို အများဆုံးတွေ့နေရတယ်လို့ လပွတ္တာမြို့ပေါ်မှာ အခမဲ့ ဆေးကုသမှု ပေး နေ တဲ့ ဆရာဝန်တဦးက ဆိုပါတယ်။
“ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ အိမ်သာမရှိဘူး။ ဟိုနား၊ ဒီနားတွေမှာ ကျင်ကြီး၊ ကျင်ငယ်စွန့်ကြတယ်။ အခု ၀မ်း ရောဂါ တွေဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆိုရင် ကာလ၀မ်းရောဂါအဆင့် ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ အမိုးအကာတွေ မရှိ တဲ့ အတွက် အအေးပတ်ပြီး နမိုးနီးယားတွေအရမ်းဖြစ်နေတယ်” လို့ အဲဒီဆရာဝန်က ဆိုပါတယ်။
လပွတ္တာမြို့ပေါ်မှာ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့(ဟော်လန်) က အခမဲ့ ဆေးခန်း ၃ ခု၊ မော်တီဆာ အဖွဲ့က ဆေးခန်း ၃ ခု ၊ မာလင် က ၃ ခု၊ အခမဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်း ၂ ခုရှိပြီး ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ဆေးဝါးအလုံအလောက် ထားရှိပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ကာလ၀မ်းရောဂါ ဖြစ်ပွားလာရင်တော့ ဒီဆေးခန်း တွေလောက်နဲ့ သိန်းဂဏန်းချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကယ်ဆယ်ဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ လပွတ္တာမြို့ခံ ဆရာဝန်က ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကို လေယာဉ်တွေနဲ့ တနေ့ပြီးတနေ့ ရောက်ရှိနေပေမယ့် မုန်တိုင်းသင့် ဒေသတွေက ဒုက္ခသည်တွေကတော့ တနေ့စာ၊ တနပ်စာ ရဖို့ ဘယ်လောက် ရုန်းကန် နေရတယ်ဆိုတာ သိရှိနိုင်အောင် တင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
The arrival of United Nations chief Ban Ki-Moon and other top UN officials in cyclone-shattered Burma on Wednesday may provide pressure on the military junta to hasten disaster relief efforts for its people, officials said on Monday.
More than two weeks after Cyclone Nargis devastated parts of Burma on May 2-3, the country has remained in the world spotlight because of the military junta's refusal to facilitate an international relief operation.
The cyclone left 133,650 people dead or missing, according to the latest government estimates, making it the worst natural disaster in Southeast Asia since the December 26, 2004, tsunami.
Unlike the swift international aid response to the tsunami, the Burmese disaster relief programme is in danger of becomingadisaster itself.
That is primarily because of the Burmese regime, which requested international assistance but has baulked at opening its reclusive country to the full-scale aid operation required to meet the needs of about 2.4 million people affected by the storm.
UN humanitarian affairs chief John Holmes arrived in Burma on Sunday and on Monday receivedabrief tour of the Irrawaddy Delta, the region hardest-hit by Cyclone Nargis.
Holmes hoped to be "granted an audience" with Burmese authorities, who could not help him Monday because as good Buddhists they had to mark the Visakha Bucha holiday commemorating the birth, death and enlightenment of the Lord Buddha.
Amanda Pitt,aspokeswoman for the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs covered up for the junta by excusing their inattention to disaster relief on their religion.
It was not even clear whether Ban would be allowed to meet the Burmese leaders if the UN chief does visit the country this week.
"We don't know who he will be meeting if he does indeed arrive in (Burma) this week," Pitt said atapress conference in Bangkok.
Members of the international aid community said they hoped Holmes and Ban would be able to pressure the generals to ramp up the relief programme.
"Of course what we want to happen is that they will be able to meet with people at the highest level of the government because clearly what we are trying to do is work towardsascaled-up response," Pitt said.
Burma has been under military dictatorships for the past 46 years with its ruling generals showingacallousness toward the well-being of their people. Junta chief, Snr Gen Than Shwe, for instance, paid his first visit to cyclone victims over the weekend, two weeks after the storm struck.
The junta, which spends millions of dollars on military equipment, has allocated5billion kyat ($4.3 million) to the relief effort for cyclone-affected regions.
While it has welcomed international aid, the regime has been harshly criticised for refusing to grant visas to international aid workers and experts. Burmese officials have only worked overtime while engaged in slowing the emergency operation.
The relief effort has started to gain some momentum, but an estimated 500,000 people are still in desperate need of food.
From May3to last weekend, the World Food Programme (WFP) flew 14 planeloads of aid to Rangoon airport, and the Red Cross managed 24. Some of the aid even has left the airport, although its destination is not actually known.
"The WFP continues to make progress, but it is slow and insufficient," agency spokesman Marcus Prior acknowledged at the Bangkok media conference.
The UN agency estimated it needs to fly in about 375 tons of foodaday to Burma to meet the requirements of 750,000 hungry people.
The military junta was the main cause for the slow delivery during the first two weeks of the UN emergency operation, sources said.
"It wasaquestion of landing rights and getting approvals," Red Cross spokesman John Sparrow said.
Like many international aid agencies, the Red Cross has been givingapositive spin to the aid effort to try to keep the government from turning off the aid spigot.
"There isamomentum and rhythm now to the pipeline going into the country," Sparrow said atapress conference. (BangkokPost.com/dpa)
United Nations - UN Secretary General Ban Ki-Moon plans to travel this week to cyclone-ravaged Burma to push for speedier relief efforts for the May2storm.
He plans to arrive on Wednesday forathree-day visit and hopes to meet with officials of the Burmese military regime, UN spokeswoman Michele Montas said Sunday at UN headquarters in New York.
The Burmese government has been sharply criticised around the world for obstructing international relief efforts.
Independent relief groups put the death toll from Cyclone Nargis at more than 100,000, with2million survivors at risk from starvation and disease if adequate food, medicine and other essential supplies do not arrive soon. (dpa)
BANGKOK — Myanmar agreed Monday to let its Southeast Asian neighbors help coordinate foreign relief assistance for cyclone victims, bending to international pressure to allow in some more outside aid, Singapore’s foreign minister, George Yeo, said.
We will establishamechanism so that aid from all over the world can flow into Myanmar,” Mr. Yeo said, speaking at an emergency meeting in Singapore of the Association of Southeast Asian Nations, or Asean, which includes Myanmar.
But he said the entry of aid workers from countries outside the Southeast Asian bloc would continue to be limited. “We have to look at specific needs — there will not be uncontrolled access,” Mr. Yeo said.
Since the cyclone, Western nations and major relief groups have raised alarm about Myanmar’s refusal to allow in large-scale relief shipments to the estimated 2.5 million survivors in need of aid after of the May3cyclone.
Myanmar has permittedasmall flow of aid from several nations, including the United States, but relief officials say that this amounts to only 20 percent of the needed supplies. Without more aid, they say, many more people may die of disease and starvation.
Myanmar’s limited concession Monday came as international pressure continued to build from several directions, with the French foreign minister, Bernard Kouchner, warning that the junta could be guilty of “crimes against humanity” if it continued to restrict the supply of aid into the country.
After failing to receiveareply to letters and telephone calls made to the military junta, United Nations Secretary General Ban Ki-moon was due to travel to Yangon this week in hopes of meeting the country’s leader, Senior Gen. Than Shwe.
More than two weeks after the cyclone, General Shwe emerged from the isolated capital, Naypyidaw, and was shown on Myanmar state media for the first time in public Monday, meeting ministers involved in the rescue effort and touring some affected areas. In addition, the government announced thatathree-day mourning period for the cyclone’s victims would begin Tuesday, The Associated Press reported. State television announced that the national flag would be flown at half-mast, beginning at9a.m.
State-run television showed General Shwe visitingarefugee camp, checking supplies, patting the heads of babies and shaking hands with survivors. Some of the cyclone victims, surrounded by neat rows of blue tents, clasped their hands and bowed as the general and other senior military officials walked by.
While acceptingalimited amount of help, the government has insisted that it can handle the disaster on its own. The televised images were part ofabroad propaganda campaign by the government to show its citizens and the outside world that it is in control of the situation.
Mr. Ban has called fora“high-level pledging conference” to deal with the crisis and for cooperation between the United Nations and Southeast Asian countries in overseeing aid delivery.
Mr. Yeo said that Asean would work with the United Nations to hold suchaconference in Yangon on May 25 to coordinate aid deliveries. He said that Myanmar had agreed to allow in medical teams from any of its nine neighbors in Asean. Thailand has already sentacontingent of more than 30 medical workers.
In addition, Myanmar has allowed in 50 medical workers from India. China’s Xinhua news agency reported thatateam of 50 Chinese medics arrived in Yangon Sunday night.
Mr. Yeo said the Myanmar government estimates losses at $10 billion in the cyclone, which swept through the Irrawaddy Delta and the country’s main city, Yangon, early on the morning of May 3.
Myanmar has raised its official death toll to 78,000.
The United Nations and France have naval vessels just outside Myanmar’s territorial waters, and are prepared to deliver supplies directly to affected areas along the coast, but they have not received clearance from the government.
Inacolumn in the French daily Le Monde, Bernard Kouchner, the French foreign minister, said the United Nations should intervene by force, or be guilty of cowardice in the eyes of the world.
“What we need to bring is hand-to-hand, heart-to-heart help, not donor conferences with all their bowing and scraping,” he said in an interview with French radio. “In the meantime, people are dying.”
Mr. Yeo rejected the idea of delivery by force. “That will create unnecessary complication,” he said at the news conference. “It will only lead to more suffering for Myanmar people.”
On Saturday, Myanmar’s powerful neighbor and ally, China, said that other countries must show “due respect” to Myanmar in its handling of the disaster within its borders.
“Myanmar isasovereign country,” said Wang Baodong,aspokesman for the Chinese Embassy in Washington, atabriefing. “In the end, rescue and relief work will have to rely on the Myanmar government and people.”
ASEAN to discuss Burma
Foreign ministers from the Association of South East Asian Nations (ASEAN) are holding an emergency meeting in Singapore shortly, to discuss ways of helping victims of the cyclone which hit Burma two weeks ago.
The Malaysian foreign minister, Dr Rais Yatim, told the BBC that there wasatremendous sense of frustration about aid not getting in to Burma, (but he added that little could be done without the cooperation of the authorities there ).The United Nations' top humanitarian official, John Holmes, is currently in Burma, carryingaletter to the Burmese leader, General Than Shwe, from the UN Secretary General, Ban Ki-Moon, who's expected to go to there this week.For his part, Than Shwe has made his first visit to victims of the cyclone (near Rangoon) since it struck. The Burmese authorities say nearly seventy-eight thousand people died in the cyclone.
In Our Report includes:
- Updated situation of Laputta byaUK medical doctor recently back from this area.
- View of Dr Myat Htoo Razak, an experienced medical personnel in public health, on current development of international dealing with the military government in an attempt to give emergency relief program to cyclone hit areas in Burma.
မုန်တိုင်းဒုက္ခသည် ၂.၄ သန်းထိ ဖြစ်လာသည့်ကြားမှ ကျော...
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဆိုင်ကလုံးဒဏ်သင့် မြန်မာ...
Tibetan Freedom Torch marched through Toronto duri...